Singapore: Mitombo ny herisetra ataon’ny jiolahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2010 7:03 GMT
Nanjary sehatra nifaneraserana ny rohy twitter #slashing sy #369 tato ho ato. Malaza amin'izany ny zava-niseho fandratrana amin'ny sabatra nataon'ireo andian-jiolahy tanora mitondra ny anarana hoe 3-6-9. Matahotra sady tezitra ny mponina manoloana ny fitombon'ny herisetra ataon'ireo jiolahy tato anatin'ny herinandro maromaro izao.
Tanora avy any Singapore anelanelan'ny 14-20 taona am-polony izao no lasibatry ny herisetra amin'ny sabatra ka nahatonga ny fanjakana handray andraikitra eo amin'ny fampanjakana ny fandriampahalemana. Voarohirohy amin'izany ny andian-jatovo mitondra ny anarana hoe 3-6-9. Fa inona moa no dikan'ny 369?
Salakau, izay raha adika ara-bakiteny dia hoe “369” amin'ny teny Hokkien, izay midika koa hoe “Sah Lak Kau”, dia andian-jiolahy mpanafika eny an-dàlana na vondrona miafina manana ny foibeny ao Singapore. Ny isa 3, 6 ary 9 ampifanampiana no manome ny isa 18, izay anarana nentina andian-jiolahy taloha, ary io isa 18 io dia ny isan'ireo lohans (mpanara-dia) an'i Shaolin.
Manomboka manoratra mikasika ireto vondrona miafina manana ny foibeny any Singapore ny mpitoraka bilaogy. Ng E-Jay, manoratra ho an'nyThe Online Citizen, milaza fa efa tafalatsaka lalina ny olana ara-tsosialy ” ka mampiroborobo ny asan-jiolahy.
…Ny firongatry ny asan-jiolahy izay mampatahotra sy ny fitomboan'ny herisetra dia ahafahana manambara ny hamafin'ny olana ara-tsosialy taloha indray ka mampiroborobo izany asan-jiolahy izany.
Afaka mitady asa sy mianatra daholo ve ny tanorantsika? Mbola mitazona ho fady ny olan'ny ankizy sy ny tanora ihany ve ny sekolintsika? Inona no nanjo ny rafim-pampianarana aty amintsika, izay tsy nahafahantsika nitady vahaolana? Ireo fanontaniana ireo no tena maika mila valiny haingana.
Raha mahatsapa ireo tanorantsika fa voailika eo amin'ny tsenan'ny asa vokatry ny fisian'ny vahiny manaiky karama mora, hivarilavo any amin'ny asan-jiolahy ve no heveriny fa vahaolana?
Tondroin'ny manam-pahefana ho tompon'andraikitra amin'izao zavatra izao ireo fianakaviana mikorontana sy ireo ray aman-dreny mahantra. Tokony apetraka àry ny fanontaniana: Inona no antony nahatonga ny fitomboan'isan'ireo tokantrano mikorontana? Tsy izany fitomboan'ny tokantrano mikorontana izany ihany ve dia ampy hitsarana fa efa tafalatsaka lalina ny olana sosialy ka tokony hesorina amin'izay?
Ohatry ny hoe miverina indray ny firoboroboan'ny tanora manao asan-jiolahy any Singapore tahaka ny tamin'ny taona 1960 sy 1970. Jufrie maneho hevitra momba ny tsy fahatomombanana hamongorona ny andian-jiolahy.
Raha variana sy sahirana amin'ny tokony atao hamongorana ny asa fampihorohoroana isika dia tsy vitantsika akory ny mamantatra ny olana goavana mahazo ny zanatsika.
Ekena fa tokony ho mailo isika manoloana ny fahavalo tsy hitantsika maso, kanefa mbola zava-dehibe mihoatra lavitra noho izany ny mahazo antoka fa voaaro amin'ny fahavalo ato anatiny ny zanantsika.
Partnership Education mampifandray ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny sy ny fitombon'ny asan-jiolahy
Ny tena olana goavana dia ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Ny ray aman-dreny maharaka toetr'andro aty Singapore mantsy dia sady mahay no manana traikefa ambony hahafahany misondrotra amin'ny asany. Ary izany fisondrotany amin'ny asany izany dia tsy hananany fotoana ho an'ny zanany izay mila fanaraha-maso koa. Raha tsy misy ny fanaraha-maso avy amin'ny ray aman-dreny dia lasa mamonjy ny jiolahy eny an-dalana eny ireny zaza ireny.
Aoka tsy hokianintsika ny any an-tsekoly satria ny asa fanabeazana dia fiaraha-miasan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Tsara raha hampahatsiarovina ny ray aman-dreny ny tokony hanokanany fotoana ho an'ny zanany koa.
Techgoondu mamakafaka ny soratra ao amin'ny twitter momba io resaka io
Raha faritako ny momba ny resaka ao amin'ny lahatsoratra 300 nalefa tao amin'ny twitter hatramin'ny omaly, dia hitako fa ny ankamaroany dia feno fahatezerana mifangaro amin'ny tahotra kely.
Ny voalohany amin'izany fanehoan-kevitra izany dia momba ny fiarovana. Mahita soratra maromaro ihany aho mitaraina momba ny fandriampahalemana any Singapore ary manamarina izany teny anivon'ny namana sy ny fianakaviana
Ao koa ireo mponina tezitra amin'ireto olon-dratsy ireto ary manontany tena hoe nahoana no any Singapore no misy helo toy izao
Ny resaka farany ao dia ho an'ny polisy izay tokony hisambotra sy hanafay ireto olon-dratsy ireto. Tsy misy olona na dia iray aza faly amin'ny fisian'ny jiolahy
Indreto ny sasany amin'ireo twitter nampiasa ny rohy#369
karrot22: Ah beng: OI , AVY AMIN'NY#369 ve ianao? Me: Tsia, avy amin'ny 257 aho. AH BENG: SAMBORY IRETO OLON-DRATSY IRETO MEH? Me: Anontanio aloha ny laharan'ny lalana misy ahy….* MIHAZAKAZAHA* #Singapore
lianglin: Jiolahy mampiasa sabatra? Tena mampalahelo. Efa taona 2010 isika izao. Hitombo haingana anie ny #369 . Tsy hahafinaritra rahoviana mihitsy ianareo. #fb
adriiannaletch: @tanshengwei manao azafady aminareo. Aza tenenina foana ny 369 isak'izay mihetsika. Tiany ny hisarika ny sain'ny olona, amin'ny alalan'ny fampirisihany azy tsy haharitra! Ampiasao kely ny saina.
ykteng: miaraka amin'ireto ankizy voasarika hanao andian-jiolahy ankehitriny. Zava-miseho kely fotsiny dia tampoka eo dakany ny baolina
EdisonLiang: Mpikambana taloha tao amin'ny fikambanan-jiolahy ankehitriny. Ohatry ny alika tsy nandalo fiofanana ry zareo
AngryBirdz: Ry vahoaka malala, vokatry ny fandratrana tamin'ny sabatra vao haingana, miangavy anao aho hitafy akanjo vy rehefa mivoaka eny an-dalana.
dinnie: Miaraka amin'ny fanindronana sabatra malaza amin'izao, Mino aho fa hanaiky ny hitondrantsika elatra misy vy maranitra ny fanjakana. Ho fiarovan-tena. Hehe.
buckONtop: RT @OthnielGaijin: Firenenan'ny lamaody i Singapore. Voalohany, dite mandroatra, avy eo dônaty, ankehitriny, FANINDRONANA AMIN'NY SABATRA!
Snippets mieritreritra asa fisorohana izay tokony hataon'ny polisy
Manontany tena aho hoe maninona no isaky ny misy foana ny zava-doza mialoha ny fandraisana fanapahan-kevitra hisoroka. Inoako fa tsy ampy ny asa fisorohana hamongorana ireto jiolahy an-dalambe – TALOHAN'ny zava-nitranga roa farany ireny. Tsy zavatra fahitantsika ve ny andiana tanora mijorojoro sy mirenireny eny rehetra eny – mifoka / mirenireny etc (na dia amin'ny andro efa hadiva haraina aza)? Tsy natao hisava sy hanara-maso azy ireny ve ny polisy? Maninona ireny ankizy ireny no tsy asaina mody any an-tranony na hidiana any amin'ny polisy any mandritra ny alina? Tsy fantatro, izany fotsiny no fanontaniana manitikitika ny saiko ao.